यी हुन् उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा भएका विश्वका दश मुलुक – Health Post Nepal
यी हुन् उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा भएका विश्वका दश मुलुक
२०७५ मंसिर ९ गते १०:३७
विश्वका प्रत्येक देशका आ–आफ्नै स्वास्थ्य नीति हुन्छन् । आफ्ना नागरिकलाई स्वस्थ राख्न सबैजसो देशले आफ्नो आवश्यकता, क्षमता र अनुकूलताअनुसार यथाशक्य प्रयत्न गरेका हुन्छन् । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर राम्रो भएका विकसित देशहरूमा पनि एकैखाले स्वास्थ्य नीति पाइन्न । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने देशमध्ये पनि कुनैमा स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः निःशुल्क हुन्छ त कुनैमा महँगो ।
सामान्यतया उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने देशहरूको कुरा गर्दा धेरैले अमेरिका वा क्यानडालाई लिने गर्छन् । तर, लाखौँ मानिसको अनुमानविपरीत न अमेरिका, न त क्यानडा नै डब्लूएचओको वर्गीकरणमा पच्चिसभित्र पर्न सफल छन् ।
स्वस्थ्य सेवा कतै पूर्णतः सरकारको जिम्मामा हुन्छ त कतै सरकारको नियमनमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवाप्रवाह हुन्छ । तर, अधिकांश विकसित देशले स्वास्थ्यबिमामार्फत आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यसेवामाथिको सुलभ पहुँच र गुणस्तरलाई सुनिश्चित गरेका हुन्छन् । व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा रहेको स्वास्थ्यसेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन विकसित देशहरूले अवलम्बन गरेका स्वास्थ्यनीति र प्रणालीबारे यहाँ चर्चा गर्नु वाञ्छनीय छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रत्येक वर्ष राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा र त्यसमा नागरिकको पहुँचका आधारमा देशहरूको वर्गीकरण गर्ने गर्छ । सामान्यतया उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने देशहरूको कुरा गर्दा धेरैले अमेरिका वा क्यानडालाई लिने गर्छन् । तर, लाखौँ मानिसको अनुमानविपरीत न अमेरिका, न त क्यानडा नै डब्लूएचओको वर्गीकरणमा पच्चिसभित्र पर्न सफल छन् । डब्लूएचओले आफ्नो र्यांकिङमा जुन देश अगाडि छ, ऊ आफ्ना नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्न सफल छ भन्ने मान्छ ।
डब्लूएचओको वर्गीकरणमा क्यानडा ३०औँ र अमेरिका ३७औँ नम्बरमा छन् । उक्त वर्गीकरणमा नेपाल १५०औँ नम्बरमा छ भने भारतको स्थान ११२औँ छ । डब्लूएचओको परिभाषामा देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समृद्धिको प्रमुख मानक मानिन्छ ।
सन् २०१८ मा डब्लूएचओले स्वास्थ्य सेवाका आधारमा गरेको देशको वर्गीकरण–
३. सान मारिनो
डब्लूएचओको वर्गीकरणमा क्यानडा ३०औँ र अमेरिका ३७औँ नम्बरमा छन् । उक्त वर्गीकरणमा नेपाल १५०औँ नम्बरमा छ भने भारतको स्थान ११२औँ छ । डब्लूएचओको परिभाषामा देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समृद्धिको प्रमुख मानक मानिन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको सबैभन्दा विकसित र शक्तिशाली राष्ट्र हो । धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ–स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका आधारमा अमेरिका डब्लूएचओको सूचीमा अघिल्ला नम्बरमा पर्न असफल छ । अमेरिका आफैँमा ठूलो जनसंख्या भएको देश भएको र त्यहाँ आप्रवासीको संख्या बढी भएकाले पनि सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राज्य संघर्षरत छ । अझै अमेरिकाको औसत आयु विश्वमा उत्कृष्ट पचारभित्र पर्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिका स्वास्थ्यमा धेरै खर्च गर्ने राष्ट्रमा पर्छ ।
फ्रान्स वर्षौंदेखि डब्लूएचओलगायत अन्य एजेन्सीको प्रक्षेपणमा पनि स्वास्थ्य सेवामा पहिलो नम्बरमा पर्न सफल छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा उनीहरू निजी र सरकारीको कम्बिनेसन प्रयोग गर्छन् । फ्रान्समा सबैजसो जनताको स्वास्थ्य बिमा गरिएको हुन्छ । यहाँ करिब ७० प्रतिशत मेडिकल बिल सरकारले तिर्ने गर्छ भने बाँकी व्यक्तिले तिर्छन् ।
इटालियनहरूले मुस्किलले प्राइभेट इन्स्योरेन्स गरेका हुन्छ । किनकि, त्यहाँ सरकारी संयन्त्रमा सबै सेवा राम्ररी समेटिएका हुन्छन् । भनिन्छ, इटालीमा सबै मानिस स्वस्थ हुन्छन् । यहाँको औसत आयु पनि निकै उच्च छ । इटालीमा डाक्टर र अस्पताल उच्च गुणस्तरका छन् भन्ने गरिन्छ ।
सान मारिनोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यसकारण पनि सहज छ कि, यहाँ जनसंख्या न्यून छ । यसलाई सानो र स्वस्थ जनसंख्या भएको देश मानिन्छ । सान मारिनोमा प्रत्येक नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य छ । तर, उनीहरू आफूले चाहेको खण्डमा निजीमा जान पनि सक्छन् ।
एन्डोराको स्वास्थ्य मोडल फ्रान्सपछिको उत्तम मानिन्छ । स्वास्थ्यका सबैजसो सूचकमा एन्डोरा उच्च स्थानमा छ । यो सानो भईकन चुस्त–दुरुस्त, धनी र उच्च कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको राज्य हो । यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्णतः राज्यबाट सञ्चालित छ । करिब ८ जनता स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर छन्, जुन अत्यन्त न्यून हो ।
माल्टा पनि राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने देशका रूपमा वर्षौंदेखि प्रख्यात छ । सन् १३०० मा यहाँ पहिलोपटक अस्पताल खुलेको थियो । यहाँ पनि सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ ।
यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, सिंगापुरजस्तो सामान्य राष्ट्र पनि स्वास्थ्य सूचकांक र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका आधारमा निकै अगाडि छ । मानव विकास सूचकांक र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि सिंगापुर अगाडि छ । यहाँ सरकारी र निजी सेवामा सन्तुलन छ । आधारभूत स्वास्थ्य सरकारले प्रदान गर्छ भने थप सेवाका लागि निजीमा जान्छन् । निजी क्षेत्रको सरकारले निरन्तर अनुगमन गर्छ ।
स्पेनको स्वास्थ्य सेवा पनि निरन्तर उच्च स्थान ओगट्न सफल छ । स्पेनले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्छ । भनिन्छ, यहाँ डाक्टर–बिरामी अनुपात ४ः१००० छ । २०१५ को डब्लूएचओको सर्भेले जापनिजभन्दा पछाडि स्पेनिस महिला धेरै वर्ष (८५.५) वर्ष बाँच्ने देखाएको छ ।
ओमानले पनि विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई बढावा दिएको छ । ओमानले आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत सेवा प्रदान गरेको छ । गत ४ दशकमा स्वास्थ्य सेवा र डाक्टरसँगको पहुँचका कारण ओमानीको जीवनस्तर गुणस्तरीय बन्दै गएको छ । सन् १९७० मा ४९.३ वर्ष मात्र रहेको ओमानीको औसत आयु २०१६ मा ७६ वर्ष पुगेको थियो । तर, निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको बढ्दो शुल्क भने ओमानीका लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।
जनतालाई उसको आम्दानीका आधारमा शुल्क निर्धारण गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सफल नमुना राष्ट्रका रूपमा चिनिएको राष्ट्र हो अस्ट्रिया । सम्पूर्ण अस्ट्रियनलाई मात्र नभएर, आश्चर्य लाग्ला, यहाँ सम्पूर्ण पर्यटक र आगन्तुकका लागि पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ । यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दुई प्रकारको छ । सबै नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्, तर धनी व्यक्तिले पैसा तिर्नुपर्ने प्रिमियम योजना रोज्न पाउँछन् । कतिपयले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवाका लागि सम्पूर्ण रूपमा शुल्क तिर्छन् ।
फरकखाले प्रणालीबाट पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो जापान । जापानमा सबैका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य छ, जुन राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत वा निजीबाट पनि हुन सक्छ । यहाँ अन्य देशको तुलनामा स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति खर्च निकै कम हुन्छ । जापनिजको औसत आयु उच्च छ । विश्वभर नै नवजात शिशु मृत्युदर जापानमा निकै कम छ र बिरामीको रिकभरी दर निकै बढी छ । जापानको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रोज्नेका लागि धेरै प्रकारका सेवा निःशुल्क उपलब्ध छन् । विश्वमा जापान स्वस्थ देशका रूपमा चिनिन्छ ।
उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा
अहिलेसम्म कहाँ-कहाँ देखिएकाे छ काठमाडाैंमा हैजा ? कसरी सतर्कता अपनाउने?
राजनीतिक ‘इगो’ मा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सिध्याउने खेल!
डा भम्पा राई जसले ‘राेयल सर्जन’ त्यागेर जीवनभर भुटानी शरणार्थीकै स्वास्थ्य सेवा गरे
यी हुन् सातौं तहमा स्तरवृद्धि गरिएका पारामेडिक्स (सूचीसहित)
युक्रेनबाट फर्किएका मेडिकल विद्यार्थीलाई आफ्नो मुलुकमा पढ्न रुसको अफर, तर किन उत्साहित छैनन्?
प्रदेशका बजेटमा स्वास्थ्यः भौतिक संरचना र सेवा विस्तारमा जोड [कुन प्रदेशको बजेट कस्तो?]